1. Inona no atao hoe Acetate octreotide?
2. Mekanisma amin'ny asan'ny Octetotide
3. Inona no ampiasain'ny Octreotide Acetate?
4. Hafiriana ny Acetate Octreotide no miasa?
5. Ahoana ny fampiasana Acetate Octreotide?
6. Octetotide Acetate Side Effects
7. Aiza no mahazo ahy ny Acetate Octreotide?
8. Hividy Acetate Octreotide Online
Raha miondrika amin'ny agonista somatostatin azo antoka ianao, dia mila manandrana ny fitsaboana trondro octreotide. Jereo ny tombotsoa azo avy amin'ny fanafody ity medikaly ity, ny fampiharana ara-pahasalamana, ny fiantraikany, ary ny fomba hidirana amin'ny medikaly ara-dalàna.
Fantatrao ve izany octreotide acetate is a drug chemo?
Misy mpiasa somatostatin maro eny an-tsena. Na dia izany aza dia mety ho tena olana tokoa ny fisintonana ny fisintonana ny bunch. Tsy tokony ho fantatrao ihany koa ireo fiantraikan'ny loza mety hitranga, fa koa azonao atao ny mamantatra raha mety handresy ny fandrosoana.
ny amin 'ny Kilonga Ny atao hoe acetate octreotide dia ny manao fihetsika toy ny mpanohitra ny famotsorana hormones tafahoatra. Noho izany antony izany dia anisan'ireo fanafody mitondra ny tsimok'aretina tany am-boalohany ho an'ny karazana gastrointestinal.
Adinoy ny momba ny fitsaboana amin'ny klioba somatostatin. Indraindray, azonao atao ny manatsara ny fampisehoana HGH ary mijaly ny vokatra ateraky ny acromérique. Eny, raha manjary loatra ny rantsantànao amin'ny fonon-tanana, dia tokony hitazona ny soavalinao ianao ary haka aketate octreotide.
Vonona ny hampiasa ity fitsaboana ity ve ianao? Andao hojerentsika ireo fepetra.
1.Inona no atao hoe Acetate octreotide?
Ny fampiasana aketsa octreotide dia miverina amin'ny 1979 rehefa namintina izany ny mpahay simity Wilfred Bauer. Na izany aza, ny medikaly dia nahazo ny fankatoavan'ny FDA folo taona taty aoriana.
Octetotide acetate aqueous dia mampiseho hetsika tahaka izany tahaka ny an'ny hormone polypeptide voajanahary. Tsy toy ny somotostatin endogenous, ny fitsaboana dia miorim-paka sy lava-miasa miaraka amin'ny antsasaky ny fiainana an-tapitrisany.
Ny halavan'ny androm-piainan'ny acetate octreotide dia asehon'ireo karazam-borona amina karazana efatra, izay manohitra ny fahasimban'ny metabolika. Anisan'izany ny alikaola, cysteine, N-phenylalanine, ary D-tryptophan.
Ny acetate octreotide dia singa octapeptide sikilezy malaza miaraka amin'ny CAS no. 83150-76-9. Izy io dia azo atao ao anaty ranon-javatra na vonona amin'ny faniriana. Na izany aza, raha te handefa vovoka be loatra ianao noho ny fikarohana ataonao dia azonao atao ny milefitra amin'ny toerana azo itokisana octreotide acetate manufacturer.
Ny fitsaboana dia manafoana ny famotsorana ny Hormone Human Growth, insuline, secretin, serotonine, ary glucagon. Na dia eo aza ny maha-dokotera ny dokotera amin'ny karazana gastroenteropancreatic sasany, ampiasaina amin'ny fitsaboana acromegaly ny octreotide acetate injection. Ity fanafody ity koa dia hanosika ny valin'ny hormonina luteinizirina (LH) amin'ny hormone gonadotropine (GnRH).
(1)Fitaovana fanorenana miorina amin'ny Octreotide
Anarana simika 10-(4-aminobutyl)-19-[(2-amino-3-phenyl-propanoyl0amino]-16-benzyl-7-(1-hydroxyethyl)-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-13-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carboxamide
Product anarana Octetotide Acetate
Klioban'ny dokotera Hormonal agents
Formula Molecular C51H70N10O12S2
Molecular weight 1079.299 g / mol
Solubility 1.22 mg / ml amin'ny rano
Azo havaozina amin'ny chlorida
Storage mari-pana Amin'ny mari-pandrefana ao anatin'ny 20 ° C mankany 30 ° C lavitra ny hazavana mivantana
2.Mekanisma amin'ny asan'ny Octetotide
Ny acetate octreotide dia manana fifandraisana marefo ho an'ny receator somatostatin-2 (SSTR2) sy SSTR5 mihoatra noho ny ataony amin'ny SSSTR3.
Octetotide acetate functions ho toy ny mpitsaboka hGH, insuline, glucagon, ary adrenocorticotropin rehefa mamehy amin'ny SSTR2. SSTR3 dia miteraka apoptose sela. Ny fanadihadiana dia manambara fa ity fatorana ity dia manana fahafaha-manao tombontsoa eo amin'ny angiogenesis angaha. Ny fampiakarana ny SSTR5 dia manana fiantraikany mitovy amin'ny an'ny receptors teo aloha somatostatin.
Ny acetate Octreotide dia miasa amin'ny fifandraisany amin'ny receator somatostatin amin'ny alalan'ny G-proteinina. Ny rafitra dia manakana ny famotsorana ireo hormones isan-karazany, anisan'izany ny GH, glucagon, ary insuline. Io hormonina mitrosa io dia misy fiantraikany eo amin'ny andrin-jiro sy ny rafitra gastrointestinal.
Ohatra, manohitra ny vokatry ny hormone hormone-hormone izy io, ary noho izany, manara-maso ny fampidirana ny HGH sy ny IGF-1. Ankoatr'izay, ny aseteta oetreotide acetate dia ny manafoana ny famokarana TSH (Ny hormonina miteraka tiroida) ary adenylyl cyclase.
Ao amin'ny GIT, acetate octreotide dia miasa amin'ny fitenenana hormonina intestinal sy pancreatic hormones, glucagon, insuline, ary ny hetsika sekretera exocrine.
Ao amin'ny marary miaraka amin'ny acromegaly, ny fitsaboana dia mampitombo ny haavon'ny hormone mitombo sy ny IGF-1.
Ny metabolisman'ny acetate octreotide dia miseho amin'ny aty.
Ny kitapom-bary vita amin'ny oktreotide dia misy karazana fitsaboana isan-karazany. Ny asany ara-batana dia mitovy amin'ny hormone somatostatin endogenous. Raiso, ohatra, ny roa amin'izy ireo manakana ny tsiambaratelon'ny hormonina mitombo, ny glucagon, ny insuline, ny cholecystokinin, ny hormone ny tiroida, ary ny gastrin.
Ny antony fototry ny acromegaly dia ny famokarana hormonina ho an'ny olombelona. Raha toa ka mitranga io tsy fetezana io, ny hothothalamus dia manosika ny famotsorana ny somatostatin, izay manomboka ny fanehoan-kevitra ratsy. Na izany aza, ny acromegaly na ny gigantisma dia hivoatra amin'ny farany rehefa tsy afaka mifehy ny haavon'ny HGH intsony ny vatana.
Ny fihinanana acetate octreotide dia manakana ny fampidirana ny hormonina mitombo amin'ny fihanaky ny pitipoa. Ity medikaly hormona ity dia mahery kokoa noho ny endogenous somatostatin. Noho izany, raha toa ianao ka nampiasa ny fampiasana ny HGH mivonto ary tsy mety intsony ny fonon-tananao, azonao atao buy octreotide acetate hanohitra ireo soritr'aretina.
(2)Fitsaboana tranga sasany
Ny oxygène d'acteat Octreotide dia fanafody fitsaboana ho an'ny tsindry HGH. Raha toa ka tsy mahomby ny fitsaboana amin'ny fitsaboana, na ny fandidiana dia tsy misy safidy, dia ho tonga ny fitsaboana.
Ny mpitsabo dia manoro ny acetate octreotide ho an'ireo marary miaraka amin'ny thyrotropinoma, syndrome carcinoid, ary karinioma gasy peptide vasoakta. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ireo sefom-pihariana ireo dia manaisotra hormones voajanahary mihoatra.
Ny fanafody dia tsy manakana fotsiny ity hormonina ity-manasitrana ny rafitra, fa manaisotra ihany koa ny soritr'aretina vokatry ny fihodinana. Raiso, ohatra; Ny acetate octreotide dia mampihena ny diarrhea mahery sy ny ranon-tsakafo, izay miseho amin'ny marary voan'ny tsindrian'ny karnaozida sy vasoakta peptide.
Amin'ny diarrhea, ny fitsaboana acetate octreotide dia manosika ny fampidirana ny fluid electrolytika ao amin'ny rindrin'ny tsina.
(3)Radiolabeling amin'ny fikarohana momba ny fanafody nokleary
Ny mpitsabo sy ny mpikaroka dia nanamarika ny Octreotide miaraka amin'ny radio-nucleotide maromaro. Ohatra, radiolabeling ny fitambarana amin'ny lutetium-177 dia fitsaboana ho an'ny sasany voan'ny neuroendocrine.
Vao haingana, ny fitambarana dia voamarika miaraka amin'ny gallium-68 sy carbon-11. Ity radiolabeling ity dia nahitana fahatsapana be loatra tamin'ny famaranana tena tsara, noho izany, fomba fanao tsara indrindra miaraka amin'ny tomoto pozidron.
Ao amin'ny octreoscan, octreotide dia asiana endri-111 amin'ny sary neuroendocrine tumors, izay maneho ny receptors somatostatin.
(4) Fitantanana varim-bozaka fanosehana
Ireo mpikarakara momba ny fahasalamana dia manoro ny acetate octreotide ho an'ireo tra-boina amin'ny cirrhosis amin'ny fery miaraka amin'ny varotra mahery vaikan'ny varimbazaha. Ny fitsaboana dia miasa mba hampihenana ny tsindry ao amin'ny vavahadin-tseranana, indrindra any amin'ireo marary izay manana cirrhosis. Izany dia mamaritra ny arterioles splanchnic mba hampihenana ny fampidiran-dra ao amin'ny vavahadin-tserasera.
Ny fianarana roa dia nanolo-kevitra ny fahombiazan'ny acetate octreotide ao amin'ny fitsaboana ny matavy.
Ny fihetsika hypothalamique manodidina ny hanoanana sy ny fisian'ny faritra ao amin'ny atidoha dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny BMI ambony sy ny atiny. Ny fikarakarana ny fitsaboana avy any aoriana na ny fitsaboana amin'ny lymphoblastique amin'ny alalan'ny radiotherapy na ny fandidiana dia mety handratra ny hypothalamus.
Vokatr'izany, io ampahany amin'ny atidoha io dia tsy hamaly intsony ireo famantarana momba ny fandanjana angovo. Any aoriana any, hisy ny fihenan'ny asa atao amin'ny vagy, ny fitrandrahana ny insuline, ary ny fitrandrahana amin'ny fiterahana. Ankoatr'izany, ny vatany dia hitondra kalôria bebe kokoa noho ny antony ilana azy, mitarika ho amin'ny fahazoana mavesatra.
Ny fakana aiséatide acetate dia manakana ny famotsorana insuline tafahoatra sy ny fananganana toeram-ponenana. Ao anatina fitsaboana iray manokana momba ny marary 18 izay misy ny dysfunction hypothalamique, ireo mpikaroka mpikaroka dia nahita fa ny acetate octreotide dia nampidina ny BMI amin'ny lohahevitra momba ny plasma.
(6)Ny fitsaboana ny gastrointestinal Fistula
Ny tsindrona acetate octreotide dia mametra ny tsiambaratelo gastrointestinal amin'ny alalan'ny fampihenana ny fivoahany.
Ny fampiharana ara-pahasalamana hafa amin'ity agent somatostatin ity dia ahitana;
Ny fitsaboana ny hypoglycemia amin'ny roa naônatina sy ny olon-dehibe
Fanapahana ny fihanaky ny insuline
Ny fitantanana ny hypotension
Ny famerenana ny vasodilazione peripheral rehefa ampiasaina eo akaikin'ny midadrine
Ny fitantanana ny hypertension amin'ny idiopathic
4.Hafiriana ny Acetate Octreotide no miasa?
Ny fihanaky ny acetate octreotide dia haingana toy ny tselatra, indrindra amin'ny fampiharana ny dite.
Taorian 'ny fitantanana ny octreotide acetate injection, dia adiny iray isaky ny adin'ny dokotera hahatratra ny toeran'ny plasma. Amin'ny ankapobeny, ny habetsahan'ny biotechnologie amin'ny octreotide acetate dia farafaharatsiny. Amin'ny ankapobeny dia mety ho ambany ny 60% ny fihenan'ny plasma ny zava-mahadomelina.
Ny halaviran-tsika mandritra ny antsasak'ity fanafody ity dia manodidina ny ora 1.8. Hatramin'ny 32% azy dia hivoaka amin'ny urine.
Ny antsasaky ny acetate octreotide matetika dia avo lenta amin'ny mararin'ny sirrhotic. Noho izany dia tokony ho ambany dia ambany ny dosage mba hisorohana ny zava-mahadomelina tsy manangona ao amin'ny rafitra. Toy izany koa, ny mpitsabo dia manova ny doka ho an'ireo niharan-doza noho ny tsy fahampian-tsakany noho ny fihenan'ny ranonorana.
5.Ahoana ny fampiasana Acetate Octreotide?
Ny ankamaroan 'ny fanjakana dia nankasitraka ny fampiasana azy ho fanafody prescription medikaly. Noho izany, afaka mividy acetate octreotide ianao raha manoratra ny dokotera.
Azonao atao ny mampiditra azy io na mitady fanampiana avy amin'ny mpitsabo. Raha tianao ny manisy tsindrona ny tenanao, dia ataovy izay azonao atao mba hikaroka torolalana amin'ny mpamaky iray na hamakiana ny torolalana ao amin'ny bokikely fampianarana. Ataovy azo antoka fa mifandray amin'ny mpamokatra octreotide azo itokisana ianao ho an'ny vovobonin'ny sterilized.
Atombohy amin'ny fanadiovana ny tranonkala fitsaboana amin'ny tiro-drongony. Ampiasao ny fanja matevina ary esorinao araka ny tokony ho izy izany aorian'ny fampiasana azy. Farany, aoka ho azo antoka fa hivezivezy avy amin'ny toerana iray amin'ny tsiranoka mankany amin'ny manaraka ary hanome toerana ampy hanasitranana sy hisorohana ny fahasosorana amin'ny hoditra. Mba hisorohana ny tsy fahampian'ny mikraoba, aza mampiasa acetate octreotide raha toa ka levona ny fampiatoana, efa mamoaka, na manana zavatra kely.
Rehefa vita ny zava-drehetra dia azonao atao ny manomana ny fampiatoana ny fanafody afecta octreotide ary mitantana izany avy hatrany. Mba hisorohana ny tsy fahampian-tsakafo dia ataovy fahazarana ny manisy tsindrona anao amin'ny fotoana mahazatra.
(1)Octobotide Acetate injection
Misy fomba telo an'ny fitantanana acetate octreotide. Na dia ny fomba tsara indrindra aza dia amin'ny alàlan'ny fampiharana, dia azonao atao ihany koa ny misafidy intramuscular (IM) na fitsaboana (IV).
Octetotide acetate suppliers Ampiasao ny fanafody amin'ny endrika roa samihafa, izay dikan-teny lava be sy fohy (famotsorana tsy misy hatak'andro). Ny fampidirana avy hatrany dia azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny aretim-pivalanana sy ny soritr'aretina mifandray amin'ny voan'ny kanserôida. Rehefa mampiasa io version io ianao, dia makà antoka fa tokony haka in-efatra isan'andro isan'andro ny octreotide acetate. Azonao atao koa ny manisy tsindrona azy na tsia.
Ny fampidirana lava dia tokony atao isaky ny efa-bolana. Io fanafarana io dia nomena fotsiny amin'ny intramuscular, indrindra amin'ny hip. Izy io dia atolotra ho an'ireo mpampiasa octreotide mpisolo toerana sy avo lenta. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ireo mpitsabo dia mametraka ireo mpikirakira eo amin'ny tsinger-dàlana fohy mandritra ny tapa-bolana mialoha ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny dokotera dia afaka manampy anao hitantana ny fanafody. Na izany aza, ny fepetra ara-potoana sy ny fikarakarana ara-pahasalamana dia hampatahotra ny ankamaroan'ny olona, ​​raha toa ka miditra amin'ny tenany izy ireo.
(2) Octetotide Acetate Dosage
Tsy maintsy mametraka acetate octreotide indroa na telo heny isan'andro ianao, arakaraka ny torolalan'ny dokotera. Ny dosage dia miankina amin'ny fepetra tianao hotratrarina, ny fahasalamanao, ny halavany, ary ny lanjany. Raiso, ohatra; Ny dopam-pamokarana dia ambany noho ny 10mg ho an'ireo mararin'ny cirrhosis sy ny aretin'ny havokavoka, izay miantso ny dialyse.
Ireo mpangataka dia mampiasa ny acetate octreotide intelo isan-kerinandro miaraka amin'ny dingana voalohany amin'ny famoahana 50mcg. Raha vao mandefitra sy mamaly tsara ny fitsaboana ny marary, dia afaka mampitombo ny habetsahan'ny presbytera ny mpikaroka na manoro hevitra ny fanoloran-kevitra efa ela.
Ny marary matetika dia mahazo ny 100mcg sy 200mcg amin'ny fanafody mba hizara roa na efatra isan'andro. Na izany aza, ny sasany dia miakatra tahaka ny 500mcg. The octreotide acetate Ny sombin-tsavan'ireto voninkazo tokana ireto dia maharesy kely amin'ny marika dinihan'i 30.
Ity misy ohatra iray amin'ny cycles of acetate octreotide roa herinandro;
Clinical Condition Dosage isan'andro
Carcinoid tumors 100 - 500 mcg
Vasoactive peptide intestinal intestinal 200 - 300mcg
Chemo sy AIDs-dia niteraka aretim-pivalanana 100-2000mcg
Bleeding varices 25mcg isaky ny roa andro
② Long Injections
Raha vantany vao tonga ny marary amin'ny famolavolana avy hatrany, ny tetik'asa momba ny fahasalamana dia hitantana ny dipoôzidà dipoavatra 20mg maharitra ela. Tsy tokony hampidirina am-bava ianao na tsia. Ny hany safidy azonao dia ny IM.
Ampiasao ny acetate octreotide ao anatin'ny fotoana fohy. Raha toa ianao ka vao avy nandefa ny famoahana tsy misy hatak'andro, dia atoroy ny dosage mandritra ny roa herinandro manaraka alohan'ny hamonoana azy. Ny antony dia hoe ilaina ny fitsaboana mba hahatratra ny haavom-pitsaboana fara-tampony taorian'ny fanindronana ny Octreotide miadaladala. Ny tsy fanarahana ny fampianarana dia mety hampihombo ny soritr'aretina.
Rehefa afaka telo volana amin'ny fampiasana io fitsaboana io, ny mpanamboatra anao dia hanara-maso ny fanatsarana rehetra, hanoratra ny vokatra hafa momba ny otetreide, ary hanitsy ny dosage. Raha toa ka efa lany ny soritr'aretina, ary mahazatra ny haavon'ny IGF-1, dia hanohy ny doka voalohany ianao. Na izany aza, io lafiny io dia mihatra raha avo bitika ny haavon'ny hormone.
Amin'ny toe-javatra izay avoakan'ny IGF-1, ny GH dia lehibe noho ny 2.5ng / mL, ary mbola tsy voafehy ny soritr'aretina, tsy maintsy mitombo ny doka. Ny dokoteranao dia afaka manome anao ny 30mg amin'ny acetate octreotide isam-bolana. Na dia betsaka aza ny habetsaky ny goavambe 40mg noho ny valinteny miadana, ny mpikaroka siantifika sy ny matihanina amin'ny fitsaboana dia manohitra ny dosie avo.
Ny marary sasany dia mirakitra ny fihenan'ny hormone mitombo sy ny IGF-1, ary ny valiny azo tsapain-tanana amin'ny soritr'aretina. Amin'io tranga io dia mety hampidina ny doka amin'ny 10mg ilay dokotera. Na izany aza, raha mitranga ny soritr'aretina dia tsy maintsy miverina amin'ny dosage 20mg ianao.
Raha oharina amin'ny famoahana tsy misy hatak'andro, ny vidin'ny aketate lava lava be dia be dia be ny sandry sy ny tongotra. Ny tarehin'ny ballpark ho an'ny 10mg vial dia $ 2000.
(3) Inona no tokony ho fantatro alohan'ny hamoahana Acetate octreotide?
① Fiaraha-miasa amin'ny zava-mahadomelina
Ny mpampiasa octreotide acetate miora amin'ny diabeta mellitus dia tsy maintsy mampidina ny tsindrona insuline. Ny antony dia manakana mafy ny sekreteran'ny glucagon ny fampidirana ny tsimok'aretina mihoatra noho ny famoahana ny fanafody insuline.
Raha mampiasa cyclosporine ianao dia ilaina ny hampitomboanao ny dosage. Ny acetate octreotide dia miasa mba hampihenana ny fihanaky ny cyclosporine amin'ny rindrin'ny tsina. Ny vokatr'izany, dia mety handà fitsabahana ny mpandoa hetra.
Ny fiparitahan'ny acetate tokana indraindray dia hampitombo ny fivelaran'ny bomokriptine, ny zava-mahadomelina amin'ny fitantanana ny aretina Parkinson. Ankoatr'izany, ity solatostatin somatostatin ity dia manana tombony lehibe amin'ny fanelingelenana ny fandaniana amin'ny sakafo. Noho izany, io fiantraikany io dia mety hanova ny fihenan'ny fanafody am-bava.
Amin'ny ankapobeny dia tokony ho azonao antoka ny hifanakalo hevitra amin'ny mpitsabo anao momba ny zavatra hafa rehetra, vitamins, fanafody, na fanafody mihoatra noho ny fanafody azonao. Ny antony dia ny fifandraisana amin'ireto medikaly ireto raha toa ka mampiasa acetate octreotide miaraka aminy ianao.
② Tantaran'ny fitsaboana
Alohan'ny ahafahanao mividy acetate octreotide, karakarao ny mitady toro-hevitra avy amin'ny dokotera momba ny fahasalamanao sy ny fahasalamanao amin'izao fotoana izao. Ohatra, raha manana diabeta ianao, dia afaka manitsy ny dosinao sy manara-maso ny siramamy ao amin'ny ra ny mpitsabo.
Raha tsy misy dokotera milaza azy io, dia aza asiana aretin-tsokosoko rehefa misy marary, aretim-panafody, diabeta, na cirrhosis. Aza misalasala koa ny fanafody toy ny areti-mando raha mijaly amin'ny zava-manahirana, vatosoa, ary tsy ampy vitaminina B12 ianao.
Ity medikaly ity dia asaina ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 18 taona. Ao anatin'ireo tranga tsy fahita firy, ireo mpikarakara ny fahasalamana dia manolotra izany ho an'ny neonates, indrindra amin'ny fitsaboana ny hipigrafy.
Ny zanaka tsy tokony Maka tsiranoka azafady octreotide mandritra ny fotoana maharitra. Ny tsara indrindra dia tokony latsaky ny herintaona. Ny antony dia hoe hampihena ny tahan'ny zaza iray io fanafody io. Ho an'ireo zokiolona dia tokony ho eo ambany elanelana ny doka satria ianao dia mitarika amin'ny aretina mifandraika amin'ny taona.
Ho an'ny tahiry fohy mandritra ny fotoana fohy ny acetate octreotide, tehirizo ao amin'ny fari-potoana ao anatin'ny 20 sy 30 degrees Celsius. Amin'ity tranga ity, ny tanjaky ny fanafody dia haharitra roa herinandro monja.
Ho an'ny tahiry maharitra, mitahiry izany ao amin'ny vata fampangatsiahana amin'ny roa ka hatramin'ny valo degre Celsius. Raha toa ka mila mametraka ny tenanao ianao dia raiso avy ao anaty kamiao ary avelao izy handratra kely ny hafanana mandritra ny adiny iray. Aza mampiasa fitaovana enti-manasitrana ny hafanana.
Ataovy izay hitazonana ny octreotide acetate vials lavitra ny hazavana mivantana. Raha vao manokatra doka tokana ianao dia alao ny ampahany tsy ampiasaina mba tsy ho voaloto. Raha toa ka misy dose maromaro ny famolavolanao fanafody, dia hitoetra ho marina mandritra ny andro 14 ny vovobony. Na izany aza, ny fahamendrehana dia miatrika ny fepetra ahafahanao mitazona toetr'andro sy miaro ny fanafody amin'ny hazavana.
Rehefa mikarakara acromegaly ianao, dia ataovy izay hahazoana aina tsara. Ny fikarohana dia manambara fa ny akromèegaly dia mahatonga ny vehivavy tsy hahavokatra. Raha vao mandray acetate octreotide ianao, dia mety ny fisian'ny zava-mahadomelina hampiakatra ny haavon'ny HGH sy hamerina ny fahavokarana. Raha tsy vonona hanangana zanaka ianao, dia omeo antoka ny fampiasana fanabeazana mety.
⑥ Octetotide preparation acetate
Ny fitsaboana dia natao maimaim-poana amin'ny vials sy ampules. Ny famotsorana tsy misy hatak'andro dia azo alaina amin'ny ampanga manodidina ny 0.05 mankany 1mg / ml. Ho an'ireny singa ireny, ny vidin'ny acetate octreotide dia latsaky ny $ 25. Na izany aza, dia natao ho an'ny dosie tokana ihany izy ireo. Rehefa nosokafana indray, dia tokony hesorina ny ampahany tsy nampiasaina.
Ny mifanohitra amin'izany, ny endri-tsoratra efa ela dia tonga amin'ny vials eo anelanelan'ny 10 sy 20mg. Izy ireo dia marika maromaro. Vantany vao misokatra, azonao atao ny mitahiry izany ao anaty vata fampangatsiahana ary ampiasaina hatramin'ny 14 andro maromaro.
6.Octetotide Acetate Side Effects
Fanehoan-kevitra momba ny hoditra ao amin'ny tranonkala fitsaboana
Fiovana amin'ny fitarazarana
Mibitsibitsika sy mitebiteby
Fiovana eo amin'ny valin'ny insuline
Maro ireo mpampiasa no tsy manoratra ny vokatra hafa vokatry ny otktreotide. Ny antony dia ny dokotera sy ny mpitsabo dia milaza ny fanafody raha tsy azony antoka fa ny tombotsoany dia mihevi-tena ho ambony. Ny ankamaroan'ireo soritr'aretina ireo dia azo averina ary hanjavona rehefa tsy manomboka ny fitsaboana.
Mariho fa ny dosie avo dia handika ny vokany.
Na dia manelingelina ny acetate octreotide aza dia manelingelina ny siramamy amin'ny marary amin'ny marary manana diabeta, dia tena ilaina ny manara-maso ny fanovana sy manitsy ny fanafody. Ny fanaintainana, ny aretin'andoha, ary ny tazo dia azo tsaboina amin'ny ibuprofen na acetaminophen. Raha ny marina, ny acetaminophen dia mitombo amin'ny fampitomboana ny fihenan'ny serum octreotide acetate.
7.Aiza no mahazo ahy ny Acetate Octreotide?
Ity fanafody ity dia misy amin'ireo mpamatsy herinaratra octreotide ho toy ny fanafody fitsaboana any Etazonia. Azo alaina avy amin'ny tahiry pharmaceutika ao an-toerana izany. Na izany aza, raha te-hamonjy fotoana sy vola ianao, ny magazay amin'ny aterineto dia mety ho azo antoka.
Ny fitsaboana medikaly marina dia tsy mandeha eny amin'ny valan-javaboary, indrindra raha mandalo amin'ny tranonkala sy tranonkala an-tserasera ianao. Tokony hahita ny tsara ianao octreotide acetate supplier amin'ny fanamarinana ny valin'ny fanamarihan'ny mpanjifa, ny famerenana, ary ny vokatra vokatra. Ankoatra izany, ny mpivarotra dia tsy maintsy manome fampahalalana feno momba ny zava-mahadomelina, anisan'izany ny fepetra fisorohana, ny akotany acetate octetotide, ny tombony, ary ny doka.
8.Hividy Acetate Octreotide Online
Ny vidin'ny acetate Octreotide dia miova arakaraka ny antony samihafa. Azonao atao, ohatra, mandany vola bebe kokoa rehefa mividy siramamy madinidinika kely fotsiny ianao, fa tsy mipoitra amin'ny vovony marefo amin'ny 83150-76-9. Ankoatr'izay, ny toerana misy anao dia manana tanana amin'ny saram-pandefasana entana sy ny vidin'ny vokatra.
Ny lava-bato Sandostatin LAR® dia manana tombam-bidy avo lenta kokoa noho ny mpanaraka azy. Ho an'ny kitapo 30mg, ny tarehin'ny ballpark dia mety ho avo noho ny 3000 bucks na mihoatra. Ny 1000 mcg / ml ny singa tokana 5ml tokana dia mitentina $ 120 sy $ 150.
Ity agonist somatostatin ity dia manana karazana fampiharana ara-pahasalamana isan-karazany, izay mbola eo ambanin'ny fikarohana.
Na dia azo alaina ihany aza amin'ny alàlan'ny fanolorana dokotera iray, dia mbola afaka miditra amin'ny zava-mahadomelina ianao amin'ny alalan'ny aterineto octreotide acetate manufacturer. Farafaharatsiny, ity dingana ity dia manavotra anao ny fahazoana prescription, indrindra rehefa te-hanohitra ny vokatry ny fatra be loatra amin'ny HGH.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny octreotide dia be dia be. Nandritra ny taona, dia nampidirina tao amin'ny fitantanana ny tsindry karbinoid sy VIPomas. Rehefa tsy mahomby ny fandidiana ary tsy misy safidy intsony ny fitsaboana amin'ny areti-mifindra, dia ity manaraka ity no fanafody manaraka.
Ny vidin'ny acetate Octreotide dia tsy tokony hatahotra anao. Raha ny marina, ny mpangataka dia afaka manamboatra kely noho ny 15 bucks ho an'ny doka fanombohana.
Shima, Y., Sasaki, Y., Shirao, K., ary Ohtsu, A. (2008). Fahombiazan'ny klinika sy ny fiarovana ny octreotide amin'ny marary Japoney voan'ny kansera amin'ny fanesorana tsindry alika. Clinical Oncology.
Lamberts, SW, Van der Lely, AJ, ary De Herder, WW (1997). Valin'ny tombontsoa azo avy amin'ny rongony amin'ny fitsaboana Acromegaly.
Gotzsche, PC, ary Hrobjartsson, A. (2008). Somatostatin Analogues ho an'ny voan'ny otokoana sasatra.
Lustig, RH, Xiong, X., Hinds, PS, et al. (2003). Ny fitsaboana Octreotide an'ny zaza tsy ampy taona.
Chadha, KM, Lombardo, J., Mashtare, T., et al. (2009). High Dose Octetotide Acetate for Management of Gastroenteropancreatic Tumors Neuroendocrine. Gazety iraisam-pirenena momba ny fikarohana sy fitsaboana ny kansera.
Chaudhry, R., Singh, B., ary Subhas, P. (2017). Octreotide in Gastroenterology. Journal Journal, Tafika Mitam-piadiana India.
Sharkey, AJ, ary Rap, NJ (2012). Ny fampiasana ny octreotide mahomby amin'ny fitsaboana ny traikefa Chylothorax. Texas Heart Institute Journal.